जीवनवृत्त : पहिलेका गरिब नेताकार्यकर्ता अहिले नवधनाढ्य भएका छन् | Ratopati
'राजा महेन्द्रले पञ्चायत व्यवस्था ल्याएपछि नेपालमा केही लोभी, पापी कम्युुनिस्ट आए'
personरातोपाटी संवाददाता exploreकाठमाडौं access_timeअसार ५, २०७६ chat_bubble_outline2
वरिष्ठ नागरिक नन्दन अर्याल सिद्धान्तनिष्ठ र समर्पित कम्युनिस्टका रूपमा चिनिनुहुन्छ । बारा बभवनका पुस्तौनी बासिन्दा अर्याल २०११ सालमा भएको ऐतिहासिक किसान आन्दोनका नेतृत्वकर्ता हुनुहुन्थ्यो । अर्याल पञ्चायत कालमा पटक पटक वारेन्टेड रहनुभयो । पाँच पटक त जेल पर्नुभएको थियो । जेलबाट छुुटेपछि पनि प्रहरीको आँखा छल्न कहिले भूमिगत रहने र कहिले भारततिर भाग्ने र फर्कने क्रम चलिरहन्थ्यो । यसरी नै उहाँका पञ्चायतकालीन तीस वर्ष वितेका थिए ।
प्रस्तुत छ अर्यालसँग रातोपाटीले गरेको कुराकानीका प्रमुख अंश :
तपाईं कहिलेबाट कम्युनिस्ट राजनीतिमा लाग्नुभयो ? कसैबाट प्रभावित भएर लाग्नुभएको थियो कि ?
बाराको बभवन गाउँमा वि.सं. १९८८ मा मेरो जन्म भएको हो । त्यहीँ हुर्केँ । विराटनगरमा काकाको घर थियो । म त्यहाँ गइरहन्थँे । २००७ सालको कुरा हो । त्यतिबेला त्यहाँका बडाहाकिम उत्तमविक्रम राणा रहेछन् । एक दिन काँग्रेसले उत्तमविक्रमलाई घेरेछ । गोली हानाहान भयो । विराटनगरबाट धेरै मानिस भागेर बाहिर गए । मेरा काका पनि बखै भाग्नुभयो । बखैबाट जोगबनी स्टेसनमा जान हिँडेका थियौँ । त्यहाँ जानका लागि गौरी स्टेसनको गोदाम घरमा बस्यौँ । मनमोहनजीको बुुबा पनि त्यहीँ बस्नुुभएको रहेछ । भेट्ने संयोग मिल्यो । उहाँले भन्नुुभयो, ‘मेरो छोरो कम्युनिस्ट भयो । काँग्रेस र राजाको पनि विरोधी भयो । हामी यताको न उताको भयौँ ।’
उहाँले ‘कम्युनिस्टहरू जातपात मान्दैनन्, धनी गरिबको भेदभाव गर्दैनन्’ आदि इत्यादि धेरै कुुराको व्याख्या पनि गर्नुुभयो । मेरो मनमा पनि जातपात नमान्ने, निजी सम्पत्तिको मोह पनि नराख्ने कम्युनिस्ट भनेको कस्तो होला भन्ने उत्सुकता भयो ।
बाबु बाजेदेखि चलिआएको कुरा भन्थे । भाग्यको कुरा भन्थे । उनीहरूलाई विश्वास हुुँदैनथ्यो । हामी विभिन्न उदाहरण दिएर सम्झाउँथ्यौँ । विस्तारै उनीहरूले पनि बुुझ्न थाले । हामीलाई मालिकले ठगेकै हो, यो भगवानको इच्छा होइन भन्ने बुझ्न थाले । तिनीहरूमा वर्गीय घृणा र आत्मसम्मानको भावना जागेको व्यवहारमै देखिन थाल्यो । सामन्ती अन्याय अत्याचारका विरोधमा आवाज उठ्न थाल्यो । ग्रामीण क्षेत्रमा वर्गसङ्घर्ष बढ्दै गयो ।
त्यहाँबाट फर्केपछि वीरगञ्जमा श्यामप्रसाद शर्मासँग मेरो सम्पर्क भयो । वीरगञ्जको जुुन ठाउँमा श्यामप्रसादजीको घर थियो । त्यसको छेउमा मेरो गाउँलेको पनि जग्गा रहेछ । ती गाउँलेले मसँग श्यामप्रसादजीको धेरै प्रशंसा गरे । भेट्न जाऊँ भने । उहाँलाई भेट्न गएँ । म उहाँबाट धेरै प्रभावित भएँ । उहाँले कम्युनिजमका बारेमा धेरै व्याख्या र विश्लेषणसाथ मलाई बताउनुभयो । त्यसपछि २००९ सालमा मैले कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता लिएँ । पार्टी सदस्य भएपछि मैले श्यामजीसँगै मिलेर काम गरँे ।
तपाईं सुरुमा कुन कुन आन्दोलनमा सरिक हुनुभयो त ?
पहिले बाहुुनले हलो जोत्न हुँदैन भन्थे । सबैभन्दा पहिले बारामा हलो जोत्ने बाहुुन मै थिएँ । त्यसपछि कम्युनिस्ट पार्टीको सङ्गठन बढाउन गाउँमा पस्यौँ । गाउँतिर कम्युनिस्ट भन्ने बित्तिकै डराउँथे । बस्न दिँदैनथे । एक ठाउँमा बसेर चिउरा किनेर खाने तरखरमा थियौँ । त्यहाँका मानिस आएर ‘खबरदार यसलाई केही बेचिस् भने’ भने ।
गाउँमा हलो जोत्ने मुुसहर हुुन्थे । हामी तिनीहरूकहाँँ जान्थ्यौँ । हामीले सँगै भएर एक छिन हलो जोत्न खोज्दा उनीहरू डराउँथे । साहूले देख्यो भने गाली गर्छ भन्थे । त्यहाँ तिनीहरूलाई हामी माक्र्सवादी शिक्षा दिन्थ्यौँ । समाजमा वर्ग छ, शोषण छ । शोषण मास्न शोषित वर्गले विद्रोह गर्नुुपर्छ भन्ने कुुरा गथ्र्याैँ ।
राजा महेन्द्रले पञ्चायत व्यवस्था ल्याएपछि नेपालमा केही लोभी, पापी कम्युुनिस्ट आए । महेन्द्रको सरकारले कति नेता कार्यकर्तालाई किनेर सत्तामा लग्यो । त्यसपछि विस्तारै नेता कार्यकर्तालाई लोभी पापी बनाउने कोसिस बढ्दै गयो । तर राजा र उनका पञ्चहरू यसमा सफल हुन सकेनन् । सीमित मानिस मात्र पञ्चायत पसे । त्यसबेलाका कम्युुनिस्टमा सिद्धान्तप्रति निष्ठा थियो ।
हामीले परम्परागत नाच मण्डलीका गीतका ठाउँमा नयाँ गीत घुसाएर पनि आन्दोलन अघि बढायौँ । सामन्ती वर्गका मानिसहरू आएर हामीले गीत गाउँदा गाउँदै रोकिदिन्थे । त्यतिबेला नाचमण्डलीमा केटाहरूलाई नै लामो लामो कपाल राखेर महिलाको जस्तो बनाउँथे । यसरी कपाल पालेको केटालाई असराहन भनिन्थ्यो । असराहन भनेको केटी बनेर नाटकमा गाउने नाच्ने केटा हो । एक पटक एक जना असराहन केटालाई एउटा सामन्तले समात्यो र मुण्डन गरिदियो । ऊ रुन थाल्यो । सामन्तहरू हामीमाथि यसरी पनि रिस पोख्थे ।
पछि सङ्गठनले व्यापकता लिँदै गयो । मानिसहरूलाई सामन्तहरू र तिनले फिँजाएका धर्मप्रति शङ्का हुुन लाग्यो । शङ्काबाट घृणा पैदा हुुन थाल्यो । घृणा हुन थालेपछि विस्तारै लडाकुु भावना पैदा भयो । खेत जसले जोत्यो त्यसको हुुनुपर्छ । ‘जिसका जोत उसका पोत’ भन्ने नारा सुुनिन थाल्यो । साहू सामन्तका एक एक ठगीको पोल खुल्न थाल्यो ।
त्यतिबेला जमिनदारहरू ठाउँ ठाउँमा खेतका एक मोहीबाट जग्गा खोसेर अर्काे मोही बनाउने गर्थे । हरेक वर्ष मोही परिवर्तन हुन्थ्यो । कम्युनिस्टको जागरण प्रचारले गर्दा खेत खोस्न दिन्नौँ भन्ने अवस्थासम्म किसान आए । यसरी विकास हुुँदाहुुँदा २०११ मा त यस भेगमा किसान आन्दोलनले विशाल विस्फोटकै रूप लियो ।
किसान आन्दोलनको नेतृत्व म, बजुर सिंह र अन्य थुुप्रै साथी मिलेर गरेका थियौँ । गाउँ गाउँबाट किसान आएका थिए । साहू सामन्तहरू पनि पुुलिस लिएर आएका थिए । त्यहाँ गोली चलाउन थालियो । मुुखलाल महतो सहिद भए । त्यसपछि सबैलाई पुुलिसले पक्राउ गर्न लाग्यो । भागाभाग भयो । म पनि जेल परँे । साथीहरू पनि जेल पर्नुभयो । जेलबाट छुुटेर आएपछि पनि हामी आन्दोलनमै लाग्यौँ ।
तपाईं त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म पनि क्रान्तिकारी बाटोमै हुनुहुन्छ भन्ने सुनिन्छ । हो त ?
म किसान सङ्गठनमा लगातार लागिरहेँ । रुस र चीनमा मतभेद भयो । यहाँ कसैले माओत्सेतुुङको त कसैले स्टालिनको विरोध गर्न थाले । त्यसपछि हामीमा विचलन पनि आयो । म रसियाको महाधिवेशनमा पनि गएको थिएँ । माओलाई स्थान दिनुुपर्छ भन्ने त्यो महाधिवेशनमा म एक्लै थिएँ । माओलार्ई विरोध गरेर हटाए । तर उहाँको योगदान त अतुुलनीय थियो ।
पञ्चायतकालमा राजा महेन्द्रले राजनीति पीडितलाई थुुप्रै जग्गा दिएका थिए । मलाई पनि सरकारले जग्गा दिएको थियो । मैले लिन मानिनँ । राजनीति पीडित हुुन मैले मन पराइनँ । सिद्धान्त लिएर हिँडेको मान्छे थिएँ म । म पञ्चायतविरुद्ध पनि सुुरुदेखि नै लागँे ।
तपाईंको समयमा कम्युनिस्टको लवाइ खवाइ कस्तो हुुन्थ्यो ? कम्युनिस्ट भनेर कसरी चिनिन्थ्यो समाजमा ?
कम्युनिस्टहरू पहिले सादा जीवन मन पराउँथे । विद्यार्थी कम्युनिस्टहरू बनारसमा बस्थे । तिनीहरू प्नि सामान्य खालका किसानको ड्रेसमा हिँड्थे । मानसम्मान खोज्दैनथे । जनतासँग कसरी मिल्न सकिन्छ भन्ने भावना थियो । अहम् भाव थिएन । कमाउन पाए हुुन्थ्यो भन्ने माहोल पनि थिएन । भएको पैसा बाँड्ने काम मात्र गर्थे ।
राजा महेन्द्रले पञ्चायत व्यवस्था ल्याएपछि नेपालमा केही लोभी, पापी कम्युुनिस्ट आए । महेन्द्रको सरकारले कति नेता कार्यकर्तालाई किनेर सत्तामा लग्यो । त्यसपछि विस्तारै नेता कार्यकर्तालाई लोभी पापी बनाउने कोसिस बढ्दै गयो । तर राजा र उनका पञ्चहरू यसमा सफल हुन सकेनन् । सीमित मानिस मात्र पञ्चायत पसे । त्यसबेलाका कम्युुनिस्टमा सिद्धान्तप्रति निष्ठा थियो । जनताका लागि ज्यान दिने सोच थियो । जोगीजस्ता त्यागी तपस्वीहरूकोे सङ्गठन थियो त्यतिबेलाका कम्युनिस्टहरूको सङ्गठन ।
त्यस बेलाका कम्युुनिस्टले परिवारमा कस्तो व्यवहार गर्थे ?
श्रीमतीलाई दबाउने चलन सर्वाहारा वर्गमा पनि थियो र सामन्ती वर्गमा र मध्यम वर्गमा पनि थियो । जो पढेलेखेका थिए उनीहरूले बुुझेका थिए । विस्तारै विस्तारै समानताको व्यवहार गर्नुुपर्छ भनेर आफूलाई त्यतातिर ढाल्ने कोसिस गरेका थिए । कम्युनिस्ट नेता, कार्यकर्ताले गरिब किसान र सर्वाहारा वर्गसँग आदर सम्मानकोे व्यवहार हुुनुुपर्छ भन्थे । किसान, सर्वाहाराहरू पनि नेता कार्यकर्ताले आफूसँग बराबरीको गरेकोबाट प्रभावित थिए । किसान र सर्वाहारा वर्गमा पनि सुध्रिने र अगाडि बढ्ने चाहना प्रशस्त थियो ।
आज सर्वहाराकरणको कुरा नगरौँ । कम्युुनिस्ट पार्टीमा रहेर कति कमायौँ ? फलानोले यति कमायो, ठेक्का पायो, तिमीले त केही पाएनौ भन्छन् । आफूलाई सर्वहाराकरण गर्ने, शोषणको विरोध गर्ने, गरिब किसानको आवाज उठाउने मजदुरलाई अगाडि बढाउने, महिलालाई अघि बढाउने मानिसले कसरी धन कमाउने ?
माथिल्लो वर्गबाट कम्युुनिस्ट भएका नेता कार्यकर्ताहरू पनि विस्तारै आफूूलाई जनताकै तहमा लैजाने, उनीहरूकै लवाइखवाइमा उतार्ने कोसिस गर्थे । उदाहरणका रूपमा विष्णुुबहादुुर मानन्धरजीलाई लिन सकिन्छ । उहाँसँग हजारौँ बिघा जमिन थियो । मेरो कार्य क्षेत्र बारा, रौतहट नै थियो । म उहाँसँग धेरै दिन पैदल हिँडेको छुु, टायरको चप्पल लगाएर । सामन्तीको छोरा हुनुहुन्थ्यो र पनि उहाँको रहनसहन सर्वहाराको तहमा उठेको थियो । उहाँले आफूूलाई सर्वहाराकरण गर्नुभएको थियो । त्यतिबेलाको स्थितिमा उहाँले आफूलाई त्यसरी सर्वहाराकरण गर्नुु सानो कुुरा थिएन ।
२०४७ पछि र अझ २०६३ पछि मानिसहरूले कम्युुनिस्ट हुुनुु भनेकोे पैसा कमाउन हो भन्ने सोचे । माथिको आफ्नै नेताले सम्पत्ति आर्जन गरिरहेको, धन कमाइरहेको तलका नेताहरूले देखे । कार्यकर्ताले पनि नेताहरूले धन कमाइरहेको देखे । नेताको नक्कल गर्न थाले । त्यसपछि तल्लो तहमा पनि म पनि कमाउँ, खाउँ भन्ने भावना जाग्योे । त्यसपछि माथिदेखि तलसम्म भ्रष्टहरूको राजनीतिक समूह नै तयार भयो ।
हिजोका कम्युनिस्ट आज नयाँ सामन्तमा परिणत भएकै हुन् त ?
कति परिणत भए भने कति परिणत नभएका राम्रा व्यक्ति पनि छन् । उनीहरू सत्तामा छैनन् । सत्तामा भए पनि असन्तुुष्ट छन् । तर मैले उहाँहरूलाई भेटेँ भने भन्छुु, ‘साँच्चै असन्तुुष्ट हुुनुुहुुन्छ भने विद्रोह गर्नुुहोस् । नयाँ सुरुवात हुन्छ !’
भ्रष्ट, तस्कर, चोर, डाका, जाली, फटाहा सबै पार्टीमै भित्रिएका छन् । तिनकै हालीमुहाली छ । इमानदारलाई प्रवेश छैन । कसरी सुध्र्रिएला र पार्टी ?
बहुदल आइसकेपछि काँग्रेस कम्युनिस्टका नेतालाई सरकारले पैसा बाँढ्यो भन्थे । तपाईंलाई दिएन ?
नाम लेखाउनुस् भनेका थिए । मैले नाम लेखाउदिनँ भने । मलाई त्यसरी पैसा लिने चाहना जागेन ।
स्वाधीनतापछि भारत सरकारले स्वतन्त्रता सेनानीहरूलाई पेन्सन बाँड्दा एक जना साधुुलाई पेन्सन पट्टा थमाएको देखेको थिएँ । सरकारले आफै खोजेर साधुुलाई पेन्सन दिएको सम्मानजनक थियो । नेपालमा त्यस्तो देखिएन ।
नेपालका विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनमा साधुले पनि भाग लिएका थिए । एकजना साधुु बद्रिदास बाबा त २००९ को किसान आन्दोलनमा जेलै परेका थिए । तिनले पनि बारामा कम्युुनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन धेरै ठूलो भूमिका खेलेको मैले देखेको छु । आफ्नो बाबुले अंश दिँदा सबै छोरालाई बराबर दिन्छन् । बाबुुले छोरामाथि पक्षपात गर्दैन्न भने भगवान्ले किन पक्षपात गर्छन् ? भगवानलाई दोष नदेऊ । सोझा सीधा श्रमजीवीलाई ठग्ने त साहू सामन्तहरू हुन् । तिनैले ठगेर तपाईंहरू गरिब बन्नुभएको हो भनेर साधुले जब भन्थे किसान मजदुरमा त्यसको प्रभाव झन् बढी पथ्र्यो ।
अहिलेका कम्युनिस्ट मन्त्रीहरूको आचरणा कस्तो देख्नुहुन्छ ?
नेपाली काँग्रेसमा जुुन जुुन वर्गको हालीमुुहाली छ, अहिले नेपाल कम्युुनिस्ट पार्टीमा पनि त्यही वर्गको हालीमुुहाली छ । पहिलेका गरिब नेता, कार्यकर्ता अहिले नवधनाढ्य भएका छन् । नेपाली काँग्रेस, माओवादी, राप्रपा तुुलना गर्ने हो भने कुुनै फरक छैनन् । उनीहरूका पार्टीको एजेन्डा फरक छ । नाम फरक छ तर उनीहरूको बानी, व्यवहार, कार्यक्रम र नीतिमा कुनै फरक देखिएको छैन ।
आचरणको तहमा विग्रिएका कम्युनिस्टहरू सुध्रन पनि सक्लान् त ?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन, जो बिग्रेका छन् उनीहरू आफू मात्र बिग्रेका छैनन् । अरूलाई पनि बिगारेका छन् । सिङ्गो पार्टीलाई नै बिगारेका छन् । सबै पार्टीलाई पैसामुुखी बनाइदिए । नेताको घरमा ठेक्का पट्टा लिन कार्यकर्ता लाम लाग्छन् । त्यस्तो प्रवृत्तिका नेता कार्यकर्ताहरूलाई कसरी सुुधार्ने ? अब यिनीहरूले सही कम्युुनिस्ट पार्टी बनाउलान् भन्ने विश्वास मलाई लाग्दैन ।
कम्युुनिस्टकोे नाममा कम्युनिस्ट आन्दोलन सिद्धिँदै छ कि के त ?
मोहन वैद्य कम्युनिस्ट आन्दोलन गर्छु भन्नुहुन्छ । नेत्र विक्रम पनि त्यही भनिरहेका छन् । तर यहाँ सामान्य कार्यक्रममा पनि नेतृत्व छैन । यिनीहरूलाई मिल्न पनि अरू साम्राज्यवादीहरूले दिएका छैनन् । जनताले विश्वास गरेको र सर्वमान्य हुन सक्ने नेता कुुनै देखापरेको छैन ।
अहिले पुनः नागरिकताको कुुरा उठेको छ । तराईमा बाहिरबाट आएका मान्छे थुुप्रै छन् । तिनीहरूकै नकारात्मक असरले तराईका जनतामा चेतना धमिलिएको छ । आउनुपर्ने चेतना आएको छैन ?
यहाँ नागरिक थुुप्रै बने । तिनीहरू नेपालको नागरिक हुुन् भने तिनीहरूको घरकहाँ छ ? जन्मस्थल कहाँ हो ? सरकारले किटानी साथ यो कहिल्यै सोधेको छैन । नेपाली नागरिको त नेपालमा पुस्तौनी घर हुुनुुपर्यो नि । घर त छ, दरभङ्गामा छ । रक्सौलमा छ । पटनामा छ । नागरिकता मात्र नेपालकोे छ । यस देशका नेताहरूले देशको सेवा गरेका छैनन् । यहाँ जसले पैसा दियो उसले नागरिकता पाउँछ । नोकरी पाउँछ ।
कुनै समय रौतहटमा २९ जना माओवादीहरू वीभत्स रूपमा मारिए । जो मरे तिनका बारेमा कुुनै माओवादी नेतागणले प्रश्न उठाएनन् । बरु मिलिजुली सरकार चलाए । नेपाली जनताले यस्ता विडम्बना पनि देखेका छन् ।
नेपालमा सही नागरिक नीति कस्तो हुनुपर्ला ?
नागरिकताका सन्दर्भमा पनि सबैभन्दा ठूलो खतरा ओपन बोर्डरमा छ । जो जति बेला आउन चाहन्छ आउँछ । यता आउने र उता जाने कुरामा नियमन छैन । यो सबैभन्दा ठूलो खतरा हो । अरू देशमा विवाह गरेर ल्याएको छ भने पाँच दस वर्षपछि नागरिकता दिने चलन हुुन्छ । हाम्रो देशमा छोरो जन्मने बित्तिकै वंशज हुुन्छ । कडाइ गरेको देखिँदैन । कडाइ नगर्ने हो भने यहाँका बासिन्दाहरू आगामी दुुई चार वर्षमा अल्पमतमा पुग्छन् ।
अनि तराईमा यदाकदा पृथकतावादका कुरा पनि सुनिन्छन् नि ?
असन्तुष्टहरू, सुुविधा नपाएकाहरू, नोकरी नपाएकाहरू, थिचोमिचोमा परेकाहरू यदा कदा त्यस्ता कुरा निकाल्छन् ।
तराईमा जातीय समस्या छ । अन्य विभिन्न शोषणका समस्या पनि छन् । जनतासम्म सरकार अहिलेसम्म पुुगेको छैन । समस्या सम्बोधन गर्न सकेको छैन । यस कारणले पनि असन्तुुष्टि छ । नेपाल सरकारको कुरा गर्ने हो भने यो सरकार कसको हो भन्ने छुुट्याउन मुुस्किल छ । यिनीहरूबाट आशा गर्ने के ?
कुनै समय रौतहटमा २९ जना माओवादीहरू वीभत्स रूपमा मारिए । जो मरे तिनका बारेमा कुुनै माओवादी नेतागणले प्रश्न उठाएनन् । बरु मिलिजुली सरकार चलाए । नेपाली जनताले यस्ता विडम्बना पनि देखेका छन् । अहिले देशभक्त जति सबै सबै पाखामा छन् । कुुनै पनि आन्दोलन जब ‘क्लाइमेक्स’मा पुग्छ, कम्युुनिस्ट भनौदाहरू बाध्य भएर एकतामा जान्छन् । नत्र जाँदैनन् । दुुर्भाग्य के छ भने यस देशमा कम्युनिस्टहरू चाहिँ मिलेर पनि मिलिरहेका छैनन् ।
उमेरमा तपाईंले जे देख्नुभयो, भोग्नुभयो त्यसको सारमा के भन्न चाहनुुहुन्छ ?
नयाँ पुुस्ताका मानिसहरू राजनीतिमा आउनुुपर्छ । पुुरानो पुुस्ताका मानिसहरू पनि नयाँ सोचमा आउनुपर्छ । कम्युनिस्ट विचारधारा लिएका सबैको एउटै पार्टी नबनाए पनि एउटा सङ्गठन बनाइयोस् । त्यस सङ्गठनबाट कार्यक्रम दिइयोस् । जनताले पत्याउने स्थिति बन्ला कि ? पार्टी जति पनि छन् मलाई त तिनीहरूमाथि विश्वासै लाग्दैन । हामीले रायमाझीदेखि नै धोका खाँदै आइरहेका छौँ । पुष्पलालजी नै हो सच्चा कम्युनिस्ट । यसको समयमा मूल्याङ्कन भएन ।
हरेक मान्छे ऊभन्दा म ठीक भनेर ढयाङ्ग्रो ठोकिरहेको् छ । तर को ठीक हो भन्ने कुरा जनताले मूल्याङ्कन गर्ने हो । अहिले सत्तामा रहेका नेताहरूले देश र जनताका भलाइका लागि केही गर्लान् भन्ने त मलाई लाग्दैन ।
तपाईंका विचारमा खास कम्युनिस्ट कस्तो हुनुपर्छ ?
पहिले कुरा त कम्युनिस्ट भनेपछि त्यागी हुनु पर्छ । स्वार्थी हुनु हुँदैन । शोषित पीडित जनताका भलाइको निम्ति सोच्ने, वर्गविहीन समाज निर्माणका लागि निरन्तर सङ्घर्ष गरिरहने, समाजमा रहेका अत्याचार अन्याय अन्त्य गर्न लागिपरिरहने, जहिले र जहाँ पनि शोषितपीडित जनको पक्षमा उभिने र शोषणबाट मुक्तिका निमित्त सङ्घर्ष गरिरहने मानिस नै सच्चा कम्युुनिस्ट हो भन्ने मलाई लाग्छ ।
पहिले र अहिलेका नेतामा फरक के पाउनुहुन्छ ?
फरक धेरै छन् । पहिलेकामा सिद्धान्त निष्ठा थियो । कमरेड पुष्पलाल धेरै असल नेता हुनुहुन्थ्यो । पञ्चायत गएर बहुदल आएपछि मदन भण्डारीले बहुदलीय जनवाद ल्याउनुभयो । यो एमालेको निम्ति सही हुन सक्छ । हामीजस्ता कम्युनिस्टका निम्ति सही हुन सक्दैन । कम्युनिस्टले कम्युनिज्मको सही कार्य दिशा लिएर हिँड्नुपर्छ । अब सच्चा कम्युनिस्टहरूले नयाँ सिराबाट सोच्नुपर्छ ।
June 20, 2019, 3:23 p.m. Omraj
"कम्युनिस्ट भनेपछि त्यागी हुनु पर्छ । स्वार्थी हुनु हुँदैन । शोषित पीडित जनताका भलाइको निम्ति सोच्ने, वर्गविहीन समाज निर्माणका लागि निरन्तर सङ्घर्ष गरिरहने, समाजमा रहेका अत्याचार अन्याय अन्त्य गर्न लागिपरिरहने, जहिले र जहाँ पनि शोषितपीडित जनको पक्षमा उभिने र शोषणबाट मुक्तिका निमित्त सङ्घर्ष गरिरहने मानिस नै सच्चा कम्युुनिस्ट हो" अहिलेको कम्युनिष्टहरु ठिक तेस्को उल्टा छन । करोडौको सम्पत्ती जम्मागर्ने र आफै सामन्त भएर बस्ने
June 20, 2019, 11:06 a.m. gopal bahadur bogati
yesto po hota kamnistako bichar aileka chor kamnista des chod
‘संविधानको प्रयोग गरेर सत्तामा पुगेकाले संविधान दिवसको विरोध गर्नु हास्यास्पद’
'बेलायतबाट विकसित भएको संसदीय मोडल सिक्न हुने, चीनको विकास/ प्रविधिका कुराहरू सिक्न किन नहुने ?'
नारीवादीले कहिल्यै आफूलाई पुरुषविरोधी भनेका छैनन्, यो आन्दोलन पितृसत्ता विरुद्ध हो
राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा पार्टीका नेताले टीका लगाइदिनु आफूलाई राजा वा दैवीअधिकार सम्पन्न ठान्ने सोच हो
विज्ञान र विज्ञान क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेलाई समाजसँग जोड्नु पनि दिवसको विशेष उद्देश्य हो